ချစ်သောကဗျာ-၅ | PoemsCorner
ကြားဖြတ်ရေးရသော စာဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက်က စ၍ပြောပါမည်။ ယခုရေးခဲ့သမျှတွင် မော်ဒန်၊ ပို.စ်မော်ဒန်၊ ဂန္ထ၀င် ဘာမှခွဲပြောနေခြင်းမရှိပါ။ ကဗျာကောင်းတို.၏ သဘောသည် အတူတူပင်ရှိသည်ဟု (ရိုးသားစွာ) ယုံကြည်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသော နည်းလမ်း၊ကိရိယာသာ ကွာခြားပါမည်။ ခွဲပြောရန်လိုအပ်လာပါက ခွဲပြောပါမည်။
ပြောသင့်သော စကားကို အထပ်ထပ်ဆိုရပါမည်။ တတ်၍ ရေးနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါသာ အမှန်ဟု တခါမှမယူဆခဲ့ပါ။ ဖတ်ဖူးသော၊မှတ်ဖူးသော စာများထဲမှ အယူအဆတူသည်တို.ကို မျှဝေခြင်းပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဥပမာများပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထပ်၍ဆိုပါမည်။ ကြိုက်ရင်ယူပါ၊ မကြိုက်ရင်ပယ်ပါ။ ဝေဖန်၍ရပါသည်။ ဆွေးနွေး၍ရပါသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်ဝယ် ရိုးသားစွာဖောက်ထွက်သော အနုပညာများရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော အနုပညာနည်းလမ်းများ၊မီဒီယာများ ၏ အားနည်းချက်ကို စွန်.ခွာ၍ အသစ်ကိုရှာဖွေသူများ၊ အောင်မြင်သူများစွာရှိခဲ့ပါသည်။ ထို. အတူ သူတို.နှင့် ကပ်၍ ပေါ်ပင်လိုက်သူများလည်းရှိနေပါသည်။
သူတို.နည်းတူ ယုံကြည်၍ သူတို.လမ်းစဉ်ကို လိုက်သူများကို ပြောရန်မရှိပါ။ အားပေးပါသည်။ သို.သော် သူတို. ၏ နည်းပညာကို အပေါ်ယံ လျှပ်ကြည့်ကာ ပုံတူကူးချသူများကိုကား ပြောရပါလိမ့်မည်။
ပီကာဆိုသည် အာဗီညွန်မိန်းမပျိုများကို ကလေးရေးသော မျက်နှာဖြင့်ရေးပါသည်။ သူ၏နက်ရှိုင်းမှုကို မသိပဲနှင့် သူ.အတိုင်းလိုက်ရေးရုံနှင် ပီကာဆိုဖြစ်မလာပါ။ လွယ်လိုက်တာဆို၍ ကလေးရေးသလိုရေးဖို.မကြိုးစားစေချင်ပါ။ ပီကာဆိုပြောဘူးပါသည်။ စာသား ထပ်တူမဟုတ်တိုင် ထိုသဘောပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်ပန်းချီဆရာတွေရေးသလို ရေးဖို.ကလွယ်တယ်။ ကလေးရေးသလို ရေးတတ်ဖို.က ကျုပ် တစ်သက်လုံး ကြိုးစားနေရတယ်ဟုဖြစ်ပါသည်။ ဆင်ချင်ကြည့်စေလိုပါသည်။
နည်းပညာတစ်ခုကို ရောက်လိုသော ခရီး အတွက် ကိရိယာဖြစ်နေလျှင်သုံးပါ။ ဝေလေလေ အုပ်စုတွင် ပါပါက ဝေလေလေ သာဖြစ်ပါမည်။ ခက်သည်က ထိုသူများက ၀ါးလုံးရှည်နှင့် ရမ်းတတ်သည်။ ငါတို.ရေးသလိုမရေးတတ်လျှင် ငပေါ။
ရိုးသားစွာ အနုပညာကို ဖန်တီးနေကြသူများသည် သူကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ကိုယ်လုပ်ပါသည်။ သူတပါးယုံကြည်ရာကို မကန်.ကွက်ပါ။ အနုပညာရှင်သည် လွတ်လပ်မှုကို တန်ဖိုးထားသူများ ဖြစ်ပါသည်။ လွတ်လပ်မှုတွင် ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုသာမက သူတပါးလွတ်လပ်မှုပါ ပါဝင်နေသည်ကို သဘောပေါက်ကြပါသည်။
ယနေ.ခေတ်သည် ပို.စ်မော်ဒန်ခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ ( အခြားသူများ မည်သို. သတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ စာရေးသူကတော့ ထိုသို. သတ်မှတ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရသည့် အကြောင်းရင်းလည်းရှိပါသည်)
ပို.စ်မော်ဒန်ခေတ်ဝယ် ပုဂ္ဂလိက သဘောကို ဦးစားပေးပါသည်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရသော ပုဂ္ဂလိက သဘောမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်နှုန်းစံများ၊ ကိုယ့်တန်ဖိုးများနှင့်ကိုယ် လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိကတရားကိုယ်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းရှင်းရန်ကြံရွယ်ထားသည်များမှ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ဤနေရာတွင် ဓားထစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
In: ဆောင်းပါး Posted By: မော်နီ Date: May 11, 2011
Leave comment No comment & 168 views